आस्थाको बिजोग:: Mero Desh
Published on: ११ माघ २०७६, शनिबार १०:१४
बढी बोल्नुको बेफाइदा के हुन्छ, यतिबेला आस्था राउतलाई सोध्नुस्। एयरपोर्टमा सेक्युरिटी चेकजाँचका क्रममा प्रहरीसँग भएको भनाभनलाई लिएर आस्थाले युद्ध छेडेपछि अहिले सामाजिक सञ्जाल दुई धु्रवमा बाँडिएको छ। एकातिर प्रहरीलाई गाली गर्ने छन् भने अर्कातिर आस्थालाई। प्रहरी चेकजाँचको
कुरालाई लिएर उनले सर्वप्रथम प्रहरीविरुद्ध मोर्चा खोलिन्, फेसबुक लाइभमा। लाइभमा उनले एयरपोर्टमा महिला प्रहरीले दुर्वाच्य प्रयोग गरेको भन्दै झन् उग्र शब्दले गाली गरिन्। उनले प्रहरीले गरेको गालीमा केही त पहिले सुन्दै नसुनेका गाली पनि थिए। उनको भिडियो भाइरल भएपछि प्रहरीले पनि एयरपोर्टको सीसीटीभी फुटेज बाहिर ल्यायो, जहाँ आस्था र प्रहरी दुवैले संयम छाडेको देखिन्छ। फुटेज बाहिर आएपछि फेरि आस्था फेसबुक लाइभमा आइन् र आफूले बोल्न नहुने शब्द बोलेको सकारिन्। तर, त्यतिमा सामाजिक सञ्जाल किन चित्त बुझाउँथ्यो? आस्थाको खेदो खन्न छाडेको छैन।
स–साना आलोचना पनि पचाउन नसक्ने गायिका हुन्, आस्था। पत्रकारले केही लेख्यो कि उनी आफू पनि पत्रकारिता पढेको भन्दै लेख्नेलाई सिकाउन थाल्थिन्। अहिले पनि उनले प्रहरीलाई सिकाउन खोजेकी थिइन्। तर, सधैँ एकनास किन हुन्थ्यो?
साम्राज्ञीराज्यलक्ष्मी शाह अहिले प्रदीप खड्काको डेट कुरिरहेकी छिन्। प्रदीपको फिल्म ‘प्रेम गीत ३’को सुटिङ निर्धारित मितिमा नसकिँदा साम्राज्ञीले उनीसँग जोडी बनेर गर्न लागेको हेमराज बिसीको फिल्म फ्लोरमा जान सकेको छैन। ‘मारुनी’ र ‘रातो टीका निधारमा’को बक्सअफिस आँकडा हेरेपछि कुनै पनि निर्माताले साम्राज्ञीलाई मोटो रकम दिएर साइन गर्न हिम्मत जुटाउन सकेका छैनन्।फलतः उनको दैनिकी प्रेमी देवांश राणाको वरिपरि चक्कर लगाएर बितिरहेको छ। तर, चक्कर लगाएर मात्र कति बस्नु? हामीलाई त साम्राज्ञी खाली बसेको देख्दादेख्दा वाक्क लागिसक्यो भने उनी स्वयंलाई कति लाग्यो होला। अन्ततः उनले म्युजिक भिडियो खेल्ने निर्णय गरेकी छिन्। तर, रमाइलो कुरा के छ भने म्युजिक भिडियो खेल्दा उनले मोडल चाहिँ अरू हैन, देवांश नै चुनेकी छिन्।